अविवाहित वडाअध्यक्ष भन्छन–‘विवाहको बारेमा सोच्ने फुर्सद नै छैन’ – Parbat News
अविवाहित वडाअध्यक्ष भन्छन–‘विवाहको बारेमा सोच्ने फुर्सद नै छैन’
२७ पुस, पर्वत । २०६३ सालमा पर्वतको एक नीजि विद्यालयबाट एसएलसी उर्तिण गरेका विमल लामिछाने उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न राजधानी पुगे । राजधानीको एक नीजि उच्च माध्यमिक विद्यालयबाट उच्च शिक्षा अध्ययन गर्दै गर्दा उनी शंकरदेव क्याम्पसमा स्नातक अध्ययनमा जुटे । पर्वतको साविक तिलाहार गाविसका लामिछानेले नमुना आवासीय उच्च माविबाट एसएलसीसम्मको अध्ययन पुरा गरेका हुन । नीजि विद्यालयमा अध्ययन गरेको छोराले देशको ठूलै सरकारी जागिर गर्ला या विदेश गएर मनग्य धन कमाउँला भन्ने परिवारका आशामा रहेका लामिछाने भने स्नातक तह अध्ययनसंगै राजनीतिमा होमिए ।
उच्च शिक्षा अध्ययनसंगै राजनीति थालेका उनी एमाले निकट युवासंघको राजनीतिमा गृह जिल्ला फर्के । शालीन, सादा र मिलनसार स्वभावका लामिछाने युवासंघको राजनीति शुरु गरेको दोस्रो बर्षमै जिल्ला अध्यक्षमा निर्वाचित भए । निर्वाचनद्धारा प्रटिद्धन्द्धीलाई भारी मतले हराउँदै जिल्ला अध्यक्ष बनेका लामिछानेले आफ्नो सम्मूर्ण कर्म राजनीतिमै लगाए । पार्टीको नवौ जिल्ला अधिवेशन पछि लामिछाने एमाले जिल्ला किमिटिको सदस्यमा मनोनित भए । योसंगै यूवासंघको राजनीतिबाट पार्टी राजनीतिको जिम्मेवारी पनि थपियो उनलाई । जिल्लाको संस्थापन पक्षलाई सघाउँदै अघि बढेका लामिछानेले अन्ततः स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडाअध्यक्षको टिकट पाए । गाउँबाटै सर्वसहमत वडाअध्यक्षमा सिफारिस भएका लामिछानेले निकटम प्रतिद्धन्द्धीलाई भारी मतले हराउँदै वडाअध्यक्षमा जीत निकाले ।
जिल्लाको मोदीगाउँपालिका वडा न ६ तिलाहारका वडा अध्यक्ष बनेका लामिछाने अन्ततः गाउँपालिकाको प्रवक्तामा समेत नियुक्त भएका छन । २६ बर्षका कान्छा वडाअध्यक्ष लामिछाने अझै पनि अविवाहित छन । ‘पहिले अध्ययनको तनाव भयो, अहिले जनताको गुनासो सुन्दैमा दिन वित्छ ।’ जनप्रतिनिधि भएपछि विहान देखि रातीसम्म जनताकै सेवा गर्दा आफ्नो बारेमा सोच्ने फुर्सद नभएको उनको भनाई छ । ‘घरबाट प्रेसर छ’ उनी थप्छन–‘कहिले काँही लाग्छ जीवन साथी नै अव मेरो राजनीति हो ।’ भन्छन–‘विवाहको बारेमा सोच्ने फुर्सद नै छैन’ । ‘अध्ययन सकेर गृह जिल्ला फर्कदा उमेरले निकै कलिलो थिए’ लामिछानेले पर्वत न्यूजसंग भने–‘राजनीति शुरु गरे, त्यहि ब्यस्त भए ।’ आफ्ना ब्यस्तताका दिनहरु बताउँदै उनले जनप्रतिनिधि भएपछि आफ्नो भन्दा गाउँ र वस्तिको चिन्ता लाग्ने गरेको बताए ।
जागिर शुरु गरेको भए मनग्य आम्दानीको सम्भावना रहेपनि लामिछानेले समाज परिर्वतनका लागि राजनीति क्षेत्र रोजेको बताउँछन । ‘ब्याप्त असमानता, गरिबी र अभाव समाप्त गर्ने उद्देश्यमा म विचलित छैन ।’ सहपाटीहरु अधिकांश विदेशमा पुगेका र धेरै इन्जिनियर, अधिकृत बनेको स्मरण गर्दै लामिछानेले पैसा र प्रतिष्ठा भन्दा समाज परिर्वतन आफ्नो पहिलो ध्यये रहेको बताउँछन । विवाह मानव जीवनको नियमित प्रक्रिया रहेको भन्दै लामिछानेले समय निकालेर त्यसको बारेमा सोच्ने बताए । जिल्लामा ६१ जना वडा अध्यक्ष मध्ये झण्डै ६० बर्ष उमेर पार गरेका वडा अध्यक्ष पनि छन । वडाअध्यक्षहरुको भीडमा कलिलो उमेरका वडाअध्यक्ष लामिछानेले वडा भित्रै नभई आफ्नो गाउँपालिकालाई कस्तो बनाउने भन्ने योजनामा आफू लागेको उनको दावी छ ।
रेडियो कुशुममा पौडेलको अध्यक्षतामा नयाँ नेतृत्व चयन
मोदी ६ तिलाहारको उदाहरणीय कार्य, वडाको सेवा अव टोल टोलमा
वस दुर्घटनाका घाइते भेट्न अध्यक्ष तिमिल्सीना अस्पतालमा
पर्वतको राम्जामा जीप र्दुघटनामा चार घाइते, घाइतेको नामावली सहित
कुश्मामा खेल मैदान निर्माण गर्ने सांसदहरुको प्रतिबद्धता
सम्बृद्ध बन्दै पर्वत : मुख्य ९ वटा ग्रामीण सडकहरु कालोपत्रे हुँदै
पर्वतमा घट्यो अनौठो घटना, श्रीमान र श्रीमतीको संगै मृत्यु
मेसिनमा पेलिएर कोरियामा पर्वतका २८ बर्षिया युवाको मृत्यु
पर्वतको माझफाँटका बेहुला र बेहुली प्रहरी नियन्त्रणमा
को–को उठदैछन पर्वतका स्थानीय तहमा प्रमुखहरु ? सम्भावित उमेदवारहरुको नामावली सहित
मनु गिरी (अमेरीका)
अर्जुन पौडेल (अमेरीका)
दिपेन्द्र गिरी (जापान)
कुनपा १०, धनेश्वर चोक, पर्वत,
Copyright © 2017-2018 Parbat News. Website designed by Dhaulagiri IT.